हाइपरइन्फ्लेसनको परिभाषा: यो के हो, जब यो हुन्छ र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अर्थव्यवस्था वित्त
हामीले कति पटक मुद्रास्फीति, स ,्कट, कति महँगो इत्यादिको बारेमा सुनेका छौ? आज धेरैलाई त्यो थाहा छ मुद्रास्फीति बढ्दो मूल्यसँग सम्बन्धित छतर जब हामी हाइपरइन्फ्लेसनको बारेमा कुरा गर्छौं, हाम्रो मतलब के हो? यस प्रश्नको स्पष्टिकरणका लागि हामीले हाइपरइन्फलेसनको परिभाषामा यस लेखलाई समर्पण गरेका छौं।
यो घटना के हो भनेर व्याख्या गर्नुको अलावा हामी यो कहिले हुन्छ र कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने बारे पनि टिप्पणी गर्नेछौं। यदि तपाइँ यस विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ र हाइपरइन्फ्लेसनको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाइँले पढ्न जारी राख्नु भयो।
1 हाइपरइन्फ्लेसन भनेको के हो?
2 हाइपरइन्फ्लेसन कहिले भनिएको छ?
2.1 दैनिक जीवनमा
3 हाइपरइन्फ्लेसन कसरी नियन्त्रण गरिन्छ?
हाइपरइन्फ्लेसन भनेको के हो?
तपाईंलाई हाइपरइन्फ्लेसनको परिभाषा दिनु अघि, पहिले सामान्य मुद्रास्फीतिको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस्। यो एक आर्थिक प्रक्रिया हो जुन माग र उत्पादनको बीचमा असंतुलन हुँदा देखा पर्दछ। यी अवस्थाहरूमा, प्राय: उत्पादनहरू र सेवाहरूको मूल्य निरन्तर बढ्दछन् जबकि पैसाको मूल्य घट्छ, त्यो हो, खरीद शक्ति घट्छ।
जब हामी हाइपरइन्फ्लेसनको बारेमा कुरा गर्छौं हाम्रो मतलब हो उच्च मुद्रास्फीति को एक धेरै लामो अवधि जहाँ मुद्राले यसको मूल्य गुमाउँछ र मूल्यहरु अनियंत्रित वृद्धि गर्न जारी छ। यस समयमा पैसा आपूर्तिमा अनियन्त्रित बृद्धि र जनसंख्याको अवमूल्यन भएको पैसालाई अवलम्बन गर्न नचाहने अनुरुप, यो आर्थिक प्रक्रिया धेरै बाहिर खडा छ। सामान्यतया, जब कुनै देश यस्तो अवस्थामा हुन्छ, मानिसहरूले सम्पत्ति वा वैदेशिक मुद्राको लागि पैसाको आदान प्रदान गर्न छनौटको लागि कुनै मूल्यको मूल्यलाई कायम राख्न। यो आवाज जति खराब छ, चीजहरू खराब हुँदै जान्छन्। यदि केन्द्रीय बैंकले संकटको समयमा ईन्जेक्सन गरिएको पैसा फिर्ता लिन असमर्थ भयो भने, यो पूरै परिदृश्य बिग्रन्छ।
लगानी कोष के हो?
२० औं शताब्दीको दौडान र आज पनि त्यहाँ धेरै पटक मुद्रास्फीति देखिएको छ। यद्यपि विगतमा तिनीहरू अत्यन्त चरम घटनाहरू भएका छन्, आजको दिनसम्म उनीहरू विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पार्दछ। ईतिहास भरमा, केहि घटनाहरू जस्तै मुद्रा सes्कट, कुनै देशको सामाजिक वा राजनीतिक अस्थिरता वा सैनिक द्वन्द्व र तिनीहरूका नतीजाहरू अति नजिकबाट सम्बन्धित छ।
हाइपरइन्फ्लेसन कहिले भनिएको छ?
१ 1956 XNUMX मा, कोलम्बिया विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका प्रोफेसर फिलिप डी कागनले हाइपरइन्फ्लेसनको परिभाषा प्रस्ताव गर्‍यो। उनको अनुसार यो घटना यो हुन्छ जब मासिक मुद्रास्फीति %०% भन्दा बढी हुन्छ र अन्त्य हुन्छ जब यो दर पछाडि कम्तिमा एक वर्षको लागि %०% भन्दा कम आउँछ।
हाइपरइन्फ्लेसनको अर्को परिभाषा पनि छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS) द्वारा दिइएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक बोर्ड (IASB) को हिस्सा हो र यसका प्रतिनिधिहरू ती हुन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा नियमहरू (IAS) निर्धारण गर्छन्। उनीहरूका अनुसार एउटा देश हाइपरइन्फ्लेसनको माध्यमबाट गुज्रिरहेको छ जब संचयी मुद्रास्फीति तीन बर्षको अवधिको लागि १००% भन्दा बढिमा थपिन्छ।
दैनिक जीवनको लागि, हामी हाइपरइन्फ्लेसनको प्रभावहरू बिभिन्न परिस्थितिहरूमा वा बिभिन्न ब्यवहारका कारणले देख्न सक्छौं। स्टोरहरू, उदाहरणका लागि, दिनको धेरै चोटि बिक्री हुने उत्पादनहरूको मूल्य पनि परिवर्तन गर्न सक्दछन्। अरु के छ त, सामान्य जनसंख्याले सकेसम्म चाँडो सामानहरूमा उनीहरूको पैसा खर्च गर्न सुरू गर्दछ, क्रय शक्ति हराउन को क्रम मा। तिनीहरू किन्नको लागि यो सामान्य छ, उदाहरणका लागि, उपकरणहरू आवश्यक छैन भने पनि।
कसरी स्टकहरू खरीद गर्ने
सामान्यतया हुने अर्को घटना भनेको उत्पादनहरूको मूल्य विदेशी मुद्रामा स्थिर हुन थाल्छ जुन स्थिर छ किनकि स्थानीय छैन। केहि केसहरूमा सहज डलराइजेशन सिर्जना गरिएको छ। त्यो भन्नुको लागि: मानिसहरू आफ्नो बचत राख्न रुचाउँछन् र सम्भव भएसम्म विदेशी मुद्रामा लेनदेन गर्दछन्।
हाइपरइन्फ्लेसन कसरी नियन्त्रण गरिन्छ?
हाइपरइन्फ्लेसन नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ र जनसंख्याको ठूलो अंशमा पूरै घटनाको समयमा राम्रो समय हुँदैन। अर्थशास्त्री र राष्ट्रिय सम्मेलनका सहायक जोसे गुएराले हाइपरइन्फ्लेशनको आफ्नो परिभाषा अनुसार यस आर्थिक विपत्ति रोक्नका लागि कूल measures वटा उपाय अपनाउन सक्ने नाम दिए। हामी तल उनीहरूमा टिप्पणी गर्न जाँदैछौं:
वित्तीय नियन्त्रण: तपाईले आवश्यक भन्दा बढी पैसा खर्च गर्नु हुँदैन र देशको गैर-प्राथमिकतामा खर्च गर्नु पर्दैन।
अधिक अजैविक पैसा जारी नगर्नुहोस्। जोसे गुएराका अनुसार "देशका प्रत्येक बैंकनोट र मुद्रालाई स्थिर बनाउन राष्ट्रिय उत्पादनले समर्थन गर्नुपर्दछ।"
विनिमय नियन्त्रण हटाउनुहोस्। यो बिना, विदेशी विनिमय को प्रवाहलाई फेरि अनुमति दिन सकिन्छ।
निजी लगानीमा हस्तक्षेप गर्ने अवरोधहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्। होसे गुएरा विश्वास गर्दछ कि नि: शुल्क आयात र निर्यातलाई अनुमति दिइनु पर्दछ र यसैले व्यापारको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
क्षेत्रहरू पुन: सक्रिय गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि यस लेखले तपाईंलाई हाइपरइन्फ्लेसन भनेको के हो र यो कसरी काम गर्दछ भनेर राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गरेको छ। सामान्यतया यो मुद्रास्फीति जस्तै हो, तर अधिक बढाइचढाइ र लामो समयसम्म। अर्थव्यवस्थाको एक सावधानीपूर्वक अध्ययनको साथ हामी यसलाई आउँदै गरेको देख्न सक्दछौं र राम्रोसँग तयारीको लागि प्रयास गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » Hyperinflation परिभाषा
Sepe: कन्ट्रास्ट डाटा